Bermuda na Azores mepere oghere ndị njem
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Bermuda na Azores mepere oghere ndị njem
Airlines • Airport • Akụkọ Bermuda na -agbasa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • News • Akụkọ na -agbasa ozi na Portugal • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Bermuda na-acho ahia ahia ndi ozo ma choo otu.
Azores Azgbọ elu ga-ebido site na Azores ruo Bermuda dị ka oge ọkọchị nke 2021, a na-ere tiketi ugbu a. N’agbata June 6 na Septemba 19, ụgbọ elu Azores ga-efe otu ugboro kwa izu n’etiti Ponta Delgada na Bermuda. Flightgbọ elu ahụ ga-arụ ọrụ na Sọnde na usoro ihe na-esonụ:
S4227 Ponta Delgada gaa Bermuda na-apụ 8:15 AM abịarute 10:25 AM
S4228 Bermuda ka Ponta Delgada na-apụ 11:40 AM abịarute 7:25 PM
'A ga-arụ ọrụ ụgbọ elu 2,224-mile na Azores Airlines Airbus A321neo airgbọ elu ahụ nwere ụgbọ elu nke ụgbọ elu ezinụlọ A320 isii, na A321neo nke a ga-eji.
Aircraftgbọ elu ahụ nwere oche 186, gụnyere 16 na klas azụmahịa.